abantu abaningi kakhulu kubuzwa lo mbuzo, "Ngingasiza kuphi ukwehla kwesisindo emzimbeni?" izincwadi eziningi ziye eziye zalotshwa ngokuphathelene nale ndaba, njengoba le bhayisikobho eyayenziwe, futhi umphumela konke kukhona. Futhi imithi ebiza kakhulu musa asize, kodwa iphendukele ukuhlinzwa plastitecheskoy - izinyathelo eyeqisayo. Yini okumelwe uyenze? Sekuyisikhathi sifune iseluleko ogogo bethu, abantu zokupheka kwesisindo futhi lwahlolwa ukuze eminyaka ngaphandle umonakalo empilweni iyokuhola beyimiqemane. Vele ukhethe ohlwini olulandelayo a amasu ambalwa ozithandayo futhi uzisebenzise njalo-ke umphumela ngeke bathathe isikhathi eside.
zokupheka boMdabu kwesisindo, ngokuyinhloko esekelwe ukusetshenziswa ngokufanele amanzi. Man for kwendikimba evamile kudingekile ukuba baphuze amalitha okungenani kabili ngosuku. Futhi amanzi avamile, kanye nezinye iziphuzo ezifana itiye, ikhofi noma ijusi, ngeke uya. Qala usuku lwakho ne ingilazi yamanzi kufanele kube ulamula noju, aphuze nengxenye ingilazi ihora ngaphambi kokudla. Proper amanzi ibhalansi emzimbeni kwandisa umzimba futhi ikusiza ukuba ahlanze umzimba ubuthi.
Ukudla okuhle isisindo ukulahleka kufanele ibe carbohydrate eziyinkimbinkimbi e ifomu okusanhlamvu. Kungcono ukuqala usuku nge ungcwecwe oatmeal noma nokunye okufana nokolweni. zokupheka boMdabu kwesisindo aseluleke indlela ashona ekuseni kwama-carbohydrate ayinkimbinkimbi ukuze usuku lonke ufuna adle kancane.
Uma ufuna ukunciphisa umzimba ngokushesha phakathi nesikhathi esifushane, ogogo bethu ukunikeza iresiphi elandelayo efakazelwe. Lingakapheli isonto udinga ukudla isobho zemifino kuphela futhi aphuze amanzi ahlanzekile noma itiye eliluhlaza. Recipe isobho magic silula. Ngezinye amalitha amathathu amanzi azithathe 500g isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, iklabishi 500g, omunye isibani, isanqante, isithungo dill futhi isithungo parsley. Zonke uxubha ngokucophelela, ahlanzekile, uthathe yizicucu amancane, Chop oluhlaza, engeza zonke imifino epanini imizuzu imizuzu 40. Umlilo kumele kube kancane! Kukhona le isobho udinga for kwasekuseni, kwasemini kanye dinner. Futhi ngemva kwesonto, wena ngithi goodbye kuya 5 Kilos futhi bazizwa bekhululekile engakaze ibonwe wonke umzimba.
zokupheka boMdabu kwesisindo belulekwa wonke umuntu ukuba ulahlekelwe isisindo bavame ukuya okugeza Russian. Wenze njalo okhokho bethu, hhayi kuphela ukubuyisela amandla abo futhi ihlanze umzimba, kodwa futhi balahle Kilos extra. Ngaphezu kwalokho, ungenza-buso-uyaxebuka uju nechobozekile zekhofi. Kumele ahlikihlwe a motion isiyingi e okhalweni, esiswini, okhalweni, bese ushiyela cwilisa parallel ongasuka masinyane ukuba pussycat kulezi zindawo umshanelo birch. Ngemva hashaza ngamanzi afudumele, ukususa izinsalela Mask massaging ezinyakazayo.
Summer iyasiza ukuhlela izinsuku ngokuzila ukudla phezu asanda isibambo zemifino ayo. Kulesi sikhathi esiswini izinso liphumula umsebenzi onzima, kanti isisindo esengeziwe ushiye kalula. zokupheka boMdabu kwesisindo belulekwa ukupheka ijusi isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ikhukhamba, iklabishi, utamatisi no amathanga. Usuku lonke udinga amanzi kubo noma kuphela ihlanzekile. Kodwa hhayi ukubamba izinsuku ezinjalo ngokuzila ukudla kungaba izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ngesonto.
Toast nge garlic
Izidlo kusukela tuna injabulo ngasiphi isikhathi sonyaka
Ingxenye emfuleni. Siyini-delta emfuleni. Gulf ngo sifinyelela engezansi emfuleni